Guushii Tottenham waxay ahayd mid Taariikhi ah Sabab? | Ciyaarside.com
Kooxaha Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa galabta kulan aad u xiisa badnaa ku wada qaatay garoonka Wembley Spur ayaana libinta heshay markii 1-0 ay gu garaaceen kooxda Gunners.
Kulanka ay wada ciyaareen kooxaha Spurs iyo Gunners aya noqdy kulnkii ugu badnaa ay soo xaadiraan taageerayaal oo horyaalka waxaana galabta malqada Wembley soo xaadiray jamaahiir dhan 83,260, oo labada dhinac u kala saca tumaya wuxuuna ahaa qodobkaasi mid kamid ahaa waxyaabihii ugu cajiibsanaa ee ciyaartii North London DERBY.
Ciyaarta oo ahayd mid xiisa badan ayaa waxaa labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar qurux badan waxaana ay abuureen labada dhinac fursado goolal loo filan karay qeybtii hore ee ciyaarta laakiin qeybtii ayaa lagu kala nastay bar baro aan waxba leyska dhalin oo 0-0 ah.
Spurs ayaa markii leysku soo laabtay qeybtii danbe ee ciyaarta la soo gashay dar dar xoogan waxaana ay u muuqatay koox isbadal ku sameyn doonta natiijada laakiin ciyaariyahan Harry Kane, ayaa daqiiqadii 49aad ee ciyaarta gool madax ah u dhaliyay kooxdiisa kadib caawinaad uu ka helay ciyaariyahan Ben Davies.
Guud ahaan jawiga garoonka ayaa is badalay markii uu goolka koowaad u dhaliyay Spur ciyaariyahan Kane Arsenal ayaa qaaday weeraro fara badan oo ay dooneysay in goolka bar baraha ay kula timaado laakiin difaacyada Tottenham ayaa diiday in shabaqooda gool la taabsiiyo.
Ciyaarta ayaa ugu danbeyntii ku soo dhamaatay natiijadaasi oo 1-0 ah Spurs ayaana sidaasi ku soo gashay booska ee jadwalka kala sareynta horyaalka England halka Arsenal ay u sii dhaadhcday kalinta shanaad ee horyaaka England iyagoo leh 45 dhibcood.